बदर मतकै चिन्ता, के भन्छन् मतदाता ? - Deshko News Deshko News बदर मतकै चिन्ता, के भन्छन् मतदाता ? - Deshko News
बदर मतकै चिन्ता, के भन्छन् मतदाता ?
पहिलो र दोस्रो तहको निर्वाचनमा बदर मत धेरै भएपछि निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको चुनावमा मतदाता शिक्षालाई जोड दिए पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय भाषामा सामग्री तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार(प्रसार गरेको आयोगको दाबी छ। त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि तराईका आठ जिल्लामा भदौ १५ बाट ३५ सय ८० स्वयंसेवक घरदैलोमै पुगेर सही रूपमा मतदान गर्ने विधि सिकाइरहेको आयोगले जनाएको छ।
एक सय ३६ स्थानीय तहको एक हजार स्थानमा नमुना मतदान गरेको थियो। आयोगले एक हजार स्थानमा गरेको मतदानमा बदर मत ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पाएको छ। ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत बदर तराईका जिल्लामै भएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल नमुना मतदान केवल नमुनाका लागि भएकाले त्यसैलाई आधार बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘घर घरमै पुगेर मतदाता शिक्षा दिइएकाले बदर मत निकै कम आउने आयोगको अपेक्षा छु, उनले भने।
मतदाता शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नगराउन र बदर मत घटाउन परिचयपत्र लिन आउने मतदातालाई मतदानस्थलमै पनि स्वयंसेवकमार्फत मतदान गर्ने तरिकाबारे सिकाइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं। २ को निर्वाचनका लागि १ अर्ब ७५ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमध्ये मतदाता शिक्षाका लागि पनि पर्याप्त रकम खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।